खुशीको खबर! अब आफ्नै घर बनाउने सपना साकार पार्न मासिक ९ हजारमा एभरेष्टको किस्ता योजना ! हेर्नुहोस के-के छ त यो योजनामा… | DON Nepal खुशीको खबर! अब आफ्नै घर बनाउने सपना साकार पार्न मासिक ९ हजारमा एभरेष्टको किस्ता योजना ! हेर्नुहोस के-के छ त यो योजनामा… – DON Nepal
Home डन समाचार खुशीको खबर! अब आफ्नै घर बनाउने सपना साकार पार्न मासिक ९ हजारमा एभरेष्टको किस्ता योजना ! हेर्नुहोस के-के छ त यो योजनामा…
खुशीको खबर! अब आफ्नै घर बनाउने सपना साकार पार्न मासिक ९ हजारमा एभरेष्टको किस्ता योजना ! हेर्नुहोस के-के छ त यो योजनामा…
By Don NepalMay 15, 2019, 08:35 am0
नेपालको एक अग्रणी बैंक एभरेष्ट बैंकले मध्यम बर्ग र निम्न वर्गीय परिवारका लागि होम लोन स्कीम सार्वजनिक गरेको छ । ‘घरभाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो भएपछि अब भाडा होइन आफ्नौ घरको किस्ता बुझाउँ’ भन्ने नारा सहित एभरेष्ट बैंकले न्यूनतम सरल मासिक किस्ता ९५९९ रुपयाको होम लोन ल्याएको हो ।
बैंकले यस अभियान अन्तर्गत ग्राहकहरुलाइ सर्भिस चार्जमा २५ प्रतिशत विशेष छुट तथा २५ वर्षसम्मका लागि लोन दिने भएको हो।
बैंकले यस अभियानको फाइदा उठाउँदै आफ्नो ग्राहकहरु तथा सबै लाइ आफ्नो घर बनाउने सपना पूरा गर्न प्रेरित गरेको छ । “सर्भिस विथ स्माईल” नारा सहित एभरेष्ट बैंकले सदैव ग्राहकको लाभ र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बैंक ले बताएको हो ।
हाल देश भर आफ्नो ९४ वटा शाखाहरु फ़ैलाइसकेको बैंकले २८ राजस्व संकलन काउन्टर र ११६ एटिएम सहित बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत ३ करोड नेपाली लाइ आर्थिक सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
Previous Post१४० रुपैयाँ किलोमा किनेको गोलभेडासंग सेल्फी खिचेर हराउला भनेर स्टुडियोमा रबी लामिछाने… Next Postज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्ता गुण भएका युवती हुन्छन् असाध्यै भाग्यशाली । जानिराख्नुहोस्